“တရားလိုဘက်တွေ စစ်ပြီးသွားပြီ၊ ပထမဦးဆုံး ဒီဥစ္စာက ဘာထုတ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် တရားမမှုဖြစ်တဲ့ အတွက် ငြင်းချက်ဆိုတာ ထုတ်ရပါတယ်။ ငြင်းချက်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ တရားလိုဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်ဆန်းဦးဘက်ကနေ သူ့ရဲ့အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်တွေရယ်၊ နောက်တခုက ကျနော်တို့ သူ့ရဲ့တရားလိုပြသက်သေတွေကို စစ်ချက်ပြီးပါပြီခင်ဗျ။ စစ်ပြီးတဲ့အခါ တရားပြိုင်ဘက်ကို စပြီးစစ်ဖို့အတွက်မှာ ဆရာဦးထွန်းတင် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်စဉ် အချိန်ကာလတုန်းက ဆရာဦးထွန်းတင်ကို အစ အဆုံး စစ်ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျ၊ စစ်ပြီးတဲ့အခါကျ နောက်ထပ် တရားပြိုင်ပြ သက်သေတွေကို
စတင်စစ်ဆေးရမယ့် အချိန်ကို ရောက်သွားပါပြီခင်ဗျ”
12/08/2011 10:21:00 PM
NLD မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း
မန္တလေးမြို့၃၂လမ်း-၃၃လမ်း၊၈၂လမ်း-၈၃လမ်း ကြားမှာရှိတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ မန္တလေးတိုင်း တိုင်းရုံးမှာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကို ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ မနက် ၉နာရီမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲကို ကဏ္ဍအစုံ နယ်ပယ်စုံက လူ ၁၃၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲကိုစီစဉ်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မန္တလေးတိုင်း ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင် ကိုမျိုးနိုင် ကို ဘားမားဗီးဂျေမှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့က မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းတဲ့ပွဲပဲ။ဒီပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့က နာယကကြီးတွေ၊ မြို့မိမြို့ဘတွေ၊ကုန်သည်တွေ၊ ဈေးချိုတော်က လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ ကွန်ပြူတာ ပညာရှင်တွေ၊ စာပေအနုပညာနယ်ပယ်က ပညာရှင်တွေ၊ ဥပဒေ ပညာရှင်တွေ၊ အမျိုးသမီးတွေ၊ လူငယ်တွေ၊ တောင်သူလယ်သမား၊အလုပ်သမားတွေနဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင် အစရှိတဲ့ မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ NLD အောင်နိုင်ရေးအတွက် လိုလားကြတဲ့ မြို့မိမြို့ဘတွေအားလုံး ဝိုင်းဝန်းပြီး ကူညီကြတဲ့ပွဲပဲ။မနက် ၉ နာရီခွဲမှာ စတယ်။၁၀ နာရီမှာ Break ခဏလုပ်တယ်။အဲမှာ ဧည့်ခံကျွေးမွေးတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ ၁၀ ခွဲမှာ ပြန်စပြီး နေ့လည် ၁ နာရီမှာ
ကျွန်တော်တို့ ဒီပွဲက မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဖို့ပဲ။ အဲအတွက်ကို ကျွန်တော်တို့က ဒီမှာတက်ရောက်လာကြတဲ့ လူတွေရဲ့ ဆန္ဒတွေကို စာရင်းပြုစုထားတယ်။ ဥပမာဆိုရင် သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး၊ စည်းရုံးလှုံဆော်ရေး
နှင့် ဘဏ္ဍာရှာကြံရေးအဖွဲ့ အစရှိတဲ့ ကဏ္ဍတွေမှာ တက်ရောက်လာတဲ့လူတွေကို အသီးသီးတာဝန်ခွဲပေးလိုက်တယ်။ အဲအပေါ်မှာ လူတွေအားလုံး လက်ခံတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့က အတည်ပြုပေးတယ်။
ကျွန်တော်တို့က ခရိုင်တွေကနေ ခရိုင်တာဝန်ခံတွေကို ခေါ်လိုက်တယ်။ ခရိုင်တာဝန်ခံတွေက မန္တလေးမှာ ခရိုင် ၆ ခရိုင်ရှိတယ်။ အဲ၆ ခရိုင်မှာ ဆက်သွယ်ရေးသဘောနဲ့ လူငယ်ပိုင်း၊လူလတ်ပိုင်းတွေကို ကျွန်တော်တို့က အဓိကထားရွေးချယ်ပြီးတော့ ခရိုင် ၁ ခုမှ ၂ ဦးဆီ ရွေးချယ်ပြီးတော့ ၆ ခရိုင်ဆိုတော့ ခရိုင်ကိုယ်စားပြု ၁၂ ဦး လာတက်တယ်။ အဲ ၁၂ ဦးကနေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က တိုင်းအောင်နိုင်ရေး ဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့အခါမှာ ခရိုင်အောင်နိုင်ရေးတွေ ဖွဲ့စည်းမယ်။ ခရိုင်အောင်နိုင်ရေးတွေ ဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့က ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရမယ့် ကိုယ်စားလှယ်ရှိတဲ့ မြို့နယ်တွေမှာ မြို့နယ်အောင်နိုင်ရေးတွေ ထပ်ဖွဲ့မယ်။ လိုအပ်ရင် ရပ်ကျေးအောင်နိုင်ရေးတွေထပ်ဖွဲ့ပြီးတော့မှ ကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက် NLD အောင်နိုင်ရေးကို ကျွန်တော်တို့က စနစ်တကျဆောင်ရွက်သွားဖို့ လုပ်ထားပါတယ်။
ကျွန်တော်က ဒီအစည်းအဝေးကို အားရတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ၉၀ ကိုလည်း ဖြတ်သန်းခဲ့တာ။ ၉၀ မှာတုန်းက ဒီလိုပွင့်လင်းမှုမျိုး မရှိဘူး။ ကျွန်တ်ာတို့ ၉၀ မှာ အဲတုန်းက ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တိုင်းကိုကိုယ်စားပြုပြီးတော့ လုပ်ရမယ့်လူကို တော်တော်လျှို့ဝှက်ပြီး ရှာခဲ့ရတာပါ။ အခုအနေအထားမှာကျတော့ ကျွန်တော်တို့သည်
ဘယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပဲ ဖြစ်ပါစေ ကူညီပံ့ပိုးမယ် ။ ဝိုင်းကြမယ်။ သိုင်းကြမယ်ဆိုပြီးတော့ ကဏ္ဍအစုံ နယ်ပယ်စုံက အင်အားစုတွေက ကျွန်တော်တို့မှာ ဝန်းရံထားတယ်။ အဲတော့ ဒီအနေအထားက အင်မတန်မှ ကောင်းပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ လူတွေကလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးတယ်။နောက် အကြံပြုတယ်။ ကျွန်တော်တို့
အပေါ်မှာလည်း လိုလိုလားလားနဲ့ ပြည်သူလူထုက ထောက်ခံမှုက ပိုရလာတယ်။ အနေအထားကလည်း ဒီကနေ့လက်ရှိ နိုင်ငံရေးအနေအထားပေါ်မှာလည်း မူတည်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူလူထုကလည်း ပွင့်လင်းလာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဆီကို အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင် ဖောင်တင်ချင်လို့ဆိုတဲ့လူတွေ အခုထိကို လာနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီအနေအထားလေးဟာ အင်မတန်မှကောင်းတဲ့အနေအထား၊ ဒီလိုအခမ်းအနားပွဲကြီးကို ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုမြို့မိမြို့ဘတွေရော၊ နာယကတွေရော၊ ကဏ္ဍစုံ၊နယ်ပယ်စုံ အသီးသီးက လူငယ်ကွန်ယက်များရော တက်ရောက်ကြပြီး သူတို့ရဲ့အမြင်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးသွားကြတာ
ကျွန်တော်တို့ အများကြီးလေးစားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆက်ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးကိစ္စတွေ သူတို့အကြံပေးချက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ ဆက်ပြီးတော့အသုံးချသွားမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီး ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။
12/08/2011 09:57:00 PM
သတင်းသမားထောင်ချထားသည့် ကမ္ဘာ့အဆိုးဆုံး အစိုးရများထဲတွင် မြန်မာအစိုးရသစ်ပါဝင်
ထောင်ချတဲ့ ကမ္ဘာ့အဆိုးဆုံး အစိုးရတွေထဲမှာ မြန်မာအစိုးရသစ်လည်း ပါဝင်တယ်လို့ သတင်းသမားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (စီပီဂျေ) က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ သတင်းသမားတွေကို ဖမ်းဆီးထောင်ချတဲ့ အဆိုးဆုံး နိုင်ငံကတော့ အီရန် နိုင်ငံဖြစ်ပြီး သတင်းသမား ၄၂ ယောက်ကို ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အီရန်နောက်က အီရီထရီးယား၊ တရုတ်၊ မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ်၊ ဆီးရီးယား၊ တူရကီတို့ကလည်း အဆိုးဆုံး နိုင်ငံတွေထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
အစိုးရသစ်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ လုပ်နေတယ်လို့ အမှတ်ပေးကြပေမယ့် သတင်းမီဒီယာကို ဖိနှိပ်တဲ့ အဆိုးဆုံးနိုင်ငံစာရင်းမှာ အဆင့် ၄ နေရာမှာရှိပြီး အနည်းဆုံး သတင်းသမား ၁၂ ယောက်ကို ဖမ်းဆီးထောင်ချထာဆဲပဲလို့ နယူးယောက်အခြေစိုက် စီပီဂျေအဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။
စီပီဂျေရဲ့ အစီရင်ခံစာအရ ဒီနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နေ့အထိ ကမ္ဘာတလွှာမှာ အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ သတင်းသမား ၁၇၉ ယောက်ရှိပြီး မနှစ်တုန်းကထက် ၃၄ ယောက် ပိုလာတယ်လို့ စီပီဂျေအဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။
အဲဒီထဲမှာ အွန်လိုင်းသတင်း သမား ၈၆ ဦး၊ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ် သတင်းသမား ၅၁ ဦးနဲ့ ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ ရေဒီယို၊ တယ်လီ ဗေးရှင်း၊ သတင်းမှတ် တမ်းရိုက်ကူးတဲ့ သတင်းသမားတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ (ဒီဗွီဘီ) ထုိုင်းဗျူရိုရဲ့ တာဝန်ခံ ကိုတိုးဇော်လတ်က အခုချိန်ထိ ဒီဗွီဘီသတင်းထောက် ၁၃ ယောက် အကျဉ်းကျခံ နေရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“အဓိက သူတို့ပေးချင်တဲ့ သတင်းကတော့ သတင်းထောက်တွေ ဒီဟာကို သတင်းယူတဲ့နေရာမှာ သူတို့ပေးထားတဲ့ စည်းမကျော်နဲ့ အဲဒါ ကျော်ရင်တော့ အခုလို ပြင်းထန်တဲ့ အရေးယူမှု လုပ်မယ်ဆိုပြီး ခြောက်ထားတာပေါ့နော်။ တကယ်တမ်း အခုဆိုရင် မီဒီယာ ဥပဒေအသစ်ကို ဆွဲတာတို့၊ မီဒီယာကို ပြန်ပြီးတော့ လျှော့ပေးတာတို့၊ စာပေစိစစ်ရေးကို ပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ စောတုန်းက ထောင်ထဲမှာ ကျနေတဲ့ သတင်းထောက်တွေကို အရင်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ သူတို့ကိစ္စကိုလည်း အစောတုန်းကလိုမျိုး ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူမှုတွေကိုလည်း
မလုပ်သင့်တော့ပါဘူး။ တကယ်တမ်း အဲဒီလို မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ဗမာပြည်ရဲ့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်က အရင်အတိုင်းပဲ ဆိုရင်တော့။ အသွင်ကူးပြောင်းတယ် ဆိုတာကို
ဘယ်သူမှ ယုံမှာ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။”
၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ကိုကို (စက်မှုတက္ကသိုလ်) က တော့ အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ အရင်ထက်စာရင် အများကြီး တိုးတက်လာတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ကျနော် ခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အရင်ကထက်စာရင် ပိုတိုးတက်လာတယ်။ တိုးတက်မှုမရှိဘူး ဆိုတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ သို့သော် စံနှုန်းစံထားတွေနဲ့ သွားမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ လုပ်ရမှာတွေ အများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်။ ၀န်ကြီးဌာနတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကတော့ ၀န်ကြီးဌာန ၃၀ ကျော်မှာ အနည်းအကျဉ်းလောက်ပဲ ပါဝင်မှု ရှိနေပါသေးတယ်။ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရသစ်တရပ် တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ သတင်းဂျာနယ်တွေ၊ သတင်းသမားတွေကို ဖမ်းဆီးခြင်း မတွေ့ရဘူး။ အခုပြောနေတဲ့ဟာတွေကလည်း အရင် အစိုးရအဆက်ဆက် လက်ထက်က ဖမ်းဆီးထားတာတွေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အခုလက်ထက်မှာ မရှိဘူး။ အရင်ကတော့ သတင်းသမားတွေ ဖမ်းခံရတာမျိုး ရှိပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် သူတို့ကို ဘယ်လို ဥပဒေမျိုးနဲ့ အရေးယူထားတယ် ဆိုတာတော့ ကျနော်မသိဘူး။ သတင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့လူတွေ ဖမ်းခံထားရတာ တချို့လည်း ရှိပါတယ်။”
သတင်းသမားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (စီပီဂျေ) အဖွဲ့ဟာ ၁၉၉၀ ခုနှစ်ကတည်းက ကမ္ဘာတလွှားက သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် အခြေအနေတွေကို စောင့်ကြည့် အစီရင်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗွီဘီ သစ်ထူးလွင်
နယ်ထိန်း ရဲတပ်ကြပ်ကြီး တဦးက လူငယ်တဦးကို နေအိမ် ခြံဝင်းအတွင်း ၀င်ရောက်၍ဓားဖြင့်ခုတ်
ရန်ကုန်တိုင်း လှည်းကူးမြို့နယ် ရဲမွန်ရပ်ကွက်တွင် မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ
နယ်ထိန်း ရဲတပ်ကြပ်ကြီး တဦးက လူငယ်တဦးကို နေအိမ် ခြံဝင်းအတွင်း ၀င်ရောက်၍ဓားဖြင့်ခုတ်သည့်အတွက် ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရခဲ့သည့်အမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒေသခံများ အကြား မကျေနပ်မှုများ
ရှိနေကြောင်း မျက်မြင်တဦးက ပြောသည်။
ယမန်နှစ် ဇူလိုင်လအတွင်းက ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမ အနီးတွင် လုံခြုံရေး ယူနေသည့် ရဲ ၀န်ထမ်း များ (ဓာတ်ပုံ - AP)
ယခုကဲ့သို့ ရဲဝန်ထမ်းတဦးအနေဖြင့် သာမန်အရပ်သားတဦးအား ဥပဒေမဲ့ ဓားဖြင့်ခုတ်သည့် အမှုကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ များအနေဖြင့် အရေးယူအပြစ်ပေးရန် အတွက် ရပ်ကွက်နေပြည်သူအများက လိုလားနေကြောင်းလည်း သိရသည်။
“လှည်းကူးအပိုင် ရဲစခန်းက ရဲတပ်ကြပ်ကြီး ချစ်လွင်က မောင်မင်းဇော်ကို သူ့အိမ်ခြံဝင်းထဲဝင်ပြီး ဓားနဲ့ဝင်ခုတ်တာ”ဟု မျက်မြင် သက်သေ ဒေသခံက ပြောဆိုသည်။
အဆိုပါ နယ်ထိန်း ရဲတပ်ကြပ်ကြီးက ဒဏ်ရာရရှိသွားသော အသက်၂၇ နှစ် အရွယ် မောင်မင်းဇော်ကို ဆေးရုံတင်၍ ဆေးဝါးကုန်ကျစရိတ်ခံ ကုသစေခဲ့ပြီး သရက်ပင်ပေါ်မှ လိမ့်ကျသည့်ဒဏ်ရာများကြောင့်ဟု ကာယကံရှင်နှင့် ဆွေမျိုးများကို လိမ် လည် ထွက်ဆိုခိုင်းထားသည်ဟု ဒေသခံ မျက်မြင်က ဆက်ပြောသည်။
သို့သော် လှည်းကူးမြို့နယ် ရဲစခန်းမှူး ဦးမောင်မောင်ဦးက လွန်ခဲ့သည့်သောကြာနေ့က အခင်းဖြစ်ခဲ့သည်မှာ နယ်ထိန်းမှ ပစ္စည်း ပျောက်မသင်္ကာ၍ သွားရောက်မေးမြန်းစဉ် အချင်းများခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
“အဲဒီကိစ္စက နယ်ထိန်းဘက်က ခြေထောက်ကို တချက်နှစ်ချက် ရိုက်လိုက်တာပါ။ နည်းနည်းတော့ လက်လွန်သွားပါတယ်” ဟု စခန်းမှူး ဦးမောင်မောင်ဦးက ဧရာဝတီ ကိုပြောသည်။
မောင်မင်းဇော်သည် ယခင်ကလည်း ရပ်ကွက်တွင်း ပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ နာမည်ပျက်စာရင်း အသွင်းခံသူ တဦး ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် နယ်ထိန်း ရဲတပ်ကြပ်ကြီးဘက်က ကာယကံရှင်အား ယခုအခါ ဆေးကုသပေးနေပြီး ရပ်မိရပ်ဘ အချင်းချင်းဖြစ်သောကြောင့် ဆွေမျိုးများကိုလည်းတောင်းပန်၍ ကြေအေးပြီ ဖြစ်ကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
မျက်မြင်ဒေသခံ ကမူ“ကာယကံရှင်နဲ့ သူ့ဆွေမျိုးတွေက ရဲပြောတဲ့အတိုင်း လိမ်ပြောထားတယ်။ တကယ်လို့ တရားစွဲ မယ် ဆိုရင် အခုဆေးကုပေးနေတာ မလုပ်ပေးတော့ဘူးလို့လည်း ခြိမ်းခြောက်ထားတယ်။ အခုက ရပ်ထဲရွာထဲမှာ ဘယ်လိုမှ ကြည့် လို့ မကောင်း ကြားလို့ မကောင်းဘူး”ဟု ပြောဆိုသည်။
ဓားဖြင့် အခုတ်ခံရသည့် မောင်မင်းဇော်အား ရပ်ရွာထဲတွင် ကြက်၊ ဘဲ စသည့် ပစ္စည်းပျောက်သည့် အခါတိုင်း စွပ်စွဲကာ မကြာခဏ ရဲစခန်းက ခေါ်ယူနှိပ်စက်ညဉ်းပန်းကြောင်းလည်း အဆိုပါ ဒေသခံက ပြောသည်။
မောင်မင်းဇော်သည် ယနေ့အထိ ဆေးကုသခံယူနေဆဲဖြစ်ပြီး ဒဏ်ရာ သက်သာမှု မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
12/08/2011 08:43:00 PM
နှစ်တစ်ရာပြည့် ဂျူဘီလီပွဲတော် ပိတ်ပွဲအခမ်းအနား (ရုပ်/သံ)
ဒီအခမ်းအနားမှာ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတဲ့ ဗာတီကန်က ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး (ဘန်နီဒစ် )Benedict ရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ် (ကာဒီနယ် တန်နတို ရက်ဖေးလီ မာတီနို) Cardinal Tenato Raffaele Martino ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ စိန့်မေရီ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ ဒီပိတ်ပွဲအခမ်းအနားမှာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Benedict ရဲ့ အထူးသဝဏ်လွှာကို ဖက်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဂျူဘီလီပွဲတော်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ကတည်းက စတင်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ အထိ ၁၀ ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
စိန့်မေရီ ကက်သလစ် ဘုရားကျောင်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း တစ်ရာလောက်ကတည်းက ပြင်သစ်နိုင်ငံ သာသနာပြု ဘုန်းတော်ကြီးတွေ တည်ထောင်ခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
12/08/2011 08:38:00 PM
ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်း အင်တာနက်လိုင်းအား One Stop Service ဖြင့် ပြန်လည်ချထားပေး
ချထားပေးမှု ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားသည့် ဂျီအက်စ်အမ်မိုဘိုင်းဖုန်း အင်တာနက်လိုင်းအား ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့၌ One Stop Service ဖြင့် ပြန်လည်ချထားပေးလျက်ရှိကြောင်း Elite Tech Service မှ သိရသည်။
ပြန်လည်ချထားပေးသည့် ဂျီအက်စ်အမ် အင်တာနက်လိုင်းမှာ ယခင်ချထားပေးခဲ့သည့်
EDGE စနစ်ပင်ဖြစ်ပြီး အင်တာနက်အမြန်နှုန်းမှာ 192kbps ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ လျှောက်ထားရာတွင် စာချုပ်၊ မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့် မိတ္တူများလိုအပ်ပြီး အင်တာနက်လိုင်း လျှောက်ထားခမှာ ကျပ်တစ်သောင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
'' ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ကစပြီး အစ်ကိုတို့ Elite Techမှာ ဂျီအက်စ်အမ် အင်တာနက်လိုင်းလျှောက်တာကို One Stop Service နဲ့ လုပ်ပေးနေပါတယ်။ အင်တာနက်အမြန်နှုန်းက 192 kbps နဲ့ တစ်မိနစ်ကို လေးကျပ်နှုန်း ကောက်သွားမှာပါ။ လိုင်းကတ်အသစ်လျှောက်မယ့်သူတွေလည်း အင်တာနက်ယူမယ်ဆိုရင် လိုင်းကတ်ဖိုးငါးသိန်းနဲ့ အင်တာနက်လိုင်းအတွက် ကျပ်တစ်သောင်း တစ်ခါတည်းသွင်းပြီး လျှောက်လို့ရပါတယ်''ဟု Elite Tech မှ ကိုစိုင်းခင်မောင်အေးက ပြောကြားသည်။
အလုံမြို့နယ်ရှိ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ရွှေဂုံတိုင်ရှိ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
12/08/2011 08:25:00 PM
မေခမြစ်တလျှောက် တရုတ်ကုမ္ပဏီများ ရွှေဆက်လက်တူးဖေါ်နေဆဲ
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလမှစ၍ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ဆုံဒေသ၌ ရွှေတူးဖော်ခွင့် ရပ်ဆိုင်းထားသော်လည်း ယင်းအထက်ဘက် မေခမြစ် တလျှောက်တွင်မူ တရုတ်ကုမ္မဏီအများအပြား ရွှေတူးဖော်သည့်လုပ်ငန်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
မြစ်ကြီးနားမြို့နှင့် ၄၅ မိုင် အကွာ ၀ိုင်းမော်မြို့နယ် မန်ဒေါင် ၊ ခ၀မ် ၊ ရှငေါ် ၊ ချောင်းဆုံ အစရှိသည့် မေခမြစ်တလျှောက် ကျေးရွာများ တွင် ရွှေတူးသည့်လုပ်ငန်းကို ယန္တရားကြီးများဖြင့် လက်လက် လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည် ကိုတွေ့ရသည်။
ယင်းဒေသများသည် ကချင်ပြည်နယ် နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးဇခုန်တိန်ယိန်း ဦးဆောင်သော နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်း (၁၀၀၂) နယ်မြေ ဖြစ်၍ ရှငေါ် ကျေးရွာသည် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အမျိူးသားလွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခက်ထိန်နန် နယ်မြေဖြစ်သည်။
မန်ဒေါင် ကျေးရွာတွင် အမှတ် (၂) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် ဦးဇခုန်တိန်ယိန်းပိုင် ဆန်းလင်း အင်တာနေရှင်နယ် အိတ်(စ်)ပို့ အင်(န်)အင်ပို့ ကုမ္မဏီ လီမိတက်နှင့် ရှငေါ်ကျေးရွာတွင် ဦးခက်ထိန်နန် ၏ မနောကမ္ဘာ ကုမ္မဏီတို့၏ ရုံးခွဲများ ဖွင့်လှစ်ထားရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံငံသားပိုင် ကုမ္ပဏီများက မေခ မြစ်ပေါ်ရှိ မြေကွက်များကို ယင်းကုမ္မဏီကြီး များထံမှ ၀ယ်ယူပြီး တရားဝင် ရွှေတူးဖော် လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးထားသည်ဟုလည်း ရှငေါ် ဒေသခံတစ်ဦးပြောသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော် အမတ် ဦးခက်ထိန်နန်သည် ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ရန်ပုံငွေရရှိရန် တရုတ်ကုမ္ပဏီများထံ သို့ မြေကွက်တစ်ကွက် ကို သိန်းတစ်ထောင်ဖြင့် ပြန်လည်ရောင်းချသည်ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
‘မြေကွက်တစ်ကွက် ကို သိန်းထောင်ချီပြီးရောင်းကြတယ် ပြီးတော့ တရုတ်တွေကို ရွှေရတဲ့ ပေါ်မှ မူတည်ပြီး ရွှေ ၃ရာခိုင်နှုန်း ကို မနောကမ္ဘာ ကုမ္မဏီ ကိုပြန်ပေးရတယ်” ဟုယင်းဒေသခံက ပြောသည်။
တရုတ် ကုမ္မဏီကြီးများသည် တရက်လျှင် ရွှေ ၂၅ ကျပ်သား အနည်းဆုံး ရရှိပြီး စက်ကြီးများဖြင့် ၂၄ နာရီ လုံးလုံး တူးဖော်လျှက်ရှိသည်။
ဆိုက်(အလုပ်ခွင်) က ၂၄ နာရီ အလုပ်လုပ်တယ် မနက် ၆နာရီ ကနေ ညနေ ၆နာရီ တစ်ဖွဲ့ ပြီးတော့ ည၆နာရီ ကနေ မနက် ၆နာရီ အထိ နေဆိုင်းညဆိုင်း လုပ်ကြတယ်ဗျာ”
ဟု တရုတ်ကုမ္မဏီတခုတွင် အလုပ်လုပ်နေသူ “ကျင်းသား” တစ်ဦးပြောသည်။
မေခမြစ်သည် မြစ်ဆုံ၏ အရေးပါသည့် မြစ်တစင်းဖြစ်သကဲ့သို့ ဧရာဝတီမြစ် စတင်မြစ်ဖျားခံသည့် မြစ်တစင်းလည်းဖြစ်သည်။
မီဂါဝပ် ၃၆၀၀ ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် ရေအားလျှပ်စစ်သုံး ဆည်တည်ဆောက်ရန် တရုတ်နိုင်ငံပိုင် CPI ကုမ္ပဏီက ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှုကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုနှင့် အခြား သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သဖြင့် နိုင်ငံရေးနှင့် မီဒီယာ၊ စာပေအနုပညာရှင်များ ၀ိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ခဲ့သဖြင့် စက်တင်ဘာလကုန်တွင် ၎င်းတို့အစိုးရလက်ထက် ရပ်ဆိုင်းထားရန် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ဦးဇခုန်တိန်ယိန်းပိုင် မာန်ဒေါင်လုပ်ကွက်ရှိ ဆန်းလင်းအင်တာနေရှင်နယ် အိတ်စ်ပို့အင်ပို့ကုမ္မဏီလီမိတက်
ဒီဇင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၁ (YPI)
12/08/2011 08:08:00 PM
ယနေ့ခေတ် ပညာရေးဟာ ဒီလောက်တောင်မှ ခြစားပိုးထိုးပျက်စီးနေပြီလား???
သမီးနဲ့ ဆငိကြီး မိုမို .......
“မွေးစားကလေးမို့လို့ ဆုတစ်ခုခု ချိတ်ရင် ပြီးရောဆိုပြီး တတိယနေရာ ထားလိုက်တာ။ ညီမ မကျေနပ်ရင် ဒုတိယ ထားပေးလိုက်မယ်။ အစကတည်းက ရှင်းရှင်း ပြောရောပေါ့ ညီမရယ်“ တဲ့ - သမီးရဲ့ အတန်းပိုင်က ကျွန်မကို ဒီနေ့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
(6.12.2011 နေ့က) သမီး ကျောင်းက ပြန်လာတော့ ပြောပါတယ်။ သူတို့အတန်းပိုင် ဆရာမက ဒီနေ့ အတန်းထဲမှာ ဆုရသူတွေ စာရင်းကို ပြောလိုက်တယ်။ သမီးက “တတိယ” ပဲ ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
သမီးတို့ရဲ့ ဒီနှစ် ပထမတန်းအတန်းပိုင် ဆရာမက မနှစ်က သူငယ်တန်း သင်ပြီး၊ ဒီနှစ်တစ်တန်းကို ဆက်သင်ရတာပါ။
သမီးက “တတိယ” ပဲ ရတယ်လို့ ပြောတော့၊ ကျွန်မတို့ တစ်အိမ်သားလုံး တော်တော် အံသြသွားကြပါတယ်။
အခု ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီကပဲ၊ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ကိုယ်တိုင် ပြောလိုက်တာပါ။ “ဆရာကြီး မြေးနဲ့ အတူတူ ပူးတွဲ ပထမ ရတယ်” လို့-။
မနှစ်က ဒီဇင်ဘာလလောက်တုံးက အတန်းပိုင်ဆရာမကို သမီးရဲ့ အခြေအနေကို မေးကြည့်တော့ ဆရာမက “ စိတ်ချပါ။ ဒုတိယနေရာ ယာထားပါတယ်” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကျောင်းအုပ်ကြီး ကိုယ်တိုင်က “ပထမ” ရတယ်လို့ ပြောလိုက်တော့၊ သြော် တကယ် ပထမဖြစ်မှာပါလေလို့ တစ်အိမ်သားလုံး ၀မ်းသာ နေကြရပါတယ်။
အခုတော့ - သူငယ်တန်းအတွက် ဆုပေးပွဲလုပ်ခါနီး ဆုစာရင်းကို တကယ်ကြေငြာတော့ - သမီးက “တတိယ” ဖြစ်နေပြန်ရော။
ပထမက (၃)ယောက်။ ဒုတိယက (၂)ယောက်။ တတိယက (၂)ယောက်။
(၃)ယောက်က - ဆရာကြီးရဲ့ မြေး၊ ဆရာမအတွက် နေ့တိုင်း ထမင်းချိုင့်တစ်ချိုင့်
ပိုပိုထည့်ယူလာတဲ့ ကောင်ကလေး။ ဒီကလေးရဲ့ အဖေအမေက ဆရာမကို အခြား အထောက်အပံ့များလည်း ရှိပါသေးသည်။ နောက်တစ်ယောက်ကိုတော့ ကျွန်မလည်း သိပ်မသိပါ။
ဒုတိယက (၂)ယောက်က ကုလားလေးတွေ။ ကုလားလေးတွေက အတန်းထဲမှာ ခိုးလည်း ခိုးတတ်သည်။ မိဘက မ၀ယ်ပေးနိုင်လို့ ခိုးတာမျိုး မဟုတ်။ တမင် ဗွေဆိုြး့ပီး လက်ဆော့တာဖြစ်သည်။ သူတို့မိဘတွေက သူတို့ ကလေး ဆိုးမှန်းသိတော့
ဆရာမကို မကြာခဏ အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှာကာ လက်ဆောင် ပေးကြသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ (၂)ရက်က ဆရာမမွေးနေ့။ ကုလားလေး တစ်ယောက်ပေးတဲ့ ဆရာမအတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင် အကျီ င်္က လှလိုက်တာ လို့တော့ သမီးက ကျွန်မကို ပြောပြသား။ ကျွန်မကလည်း ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်က မြေးနဲ့ အတူတူ ပူးတွဲ ပထမ ရတယ်” လို့ ပြောထားပြီးသားဖြစ်နေတော့ - အမှတ်တမဲ့ နေလိုက်မိပါတယ်။
ကျွန်မသမီး သူငယ်တန်းအတွက် ဆုက - ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ - အမျိုးမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘယ်ဟာ အမှန်လဲဆိုတာ ကျွန်မရော ကျွန်မမိဘတွေကပါ သိချင်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီနေ့ နေ့လည် ဆရာမဆီကို သွားမေးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒိတော့ အတန်းပိုင်ဆရာမက ပြောပါတယ်။ ချက်ချင်းကို ပြောလိုက်တာပါ။ “မွေးစားကလေးမို့လို့ ဆုတစ်ခုခု ချိတ်ရင် ပြီးရောဆိုပြီး တတိယနေရာ ထားလိုက်တာ။ ညီမ မကျေနပ်ရင် ဒုတိယ ထားပေးလိုက်မယ်“
“ကျွန်မသမီးကို ဘာဆုမှလည်း ပေးမနေပါနဲ့ ဆရာမရယ်” လို့ ကျွန်မ ပြောခဲ့လိုက်တယ်။
ညီမ စိတ်ဆိုးတာ မဟုတ်လား၊ ဆရာကြီးနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ပထမနေရာ ဖြစ်အောင် လုပ်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်၊ မနက်ဖြန် ဒီလိုအချိန် အစ်မဆီ ပြန်လာခဲ့ပါ” လို့ ဆရာမက ကျွန်မလက်ကို နောက်က လိုက်ဆွဲပြီး ပြောပါတယ်။
အငြိုအညင်ကို ဆရာမ လုံးဝ မလိုလားနိုင်တာ အသိသာကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ အခြားသော ကလေးတွေရဲ့ အမေတွေကိုရော ဒီလိုပဲ ဆရာမ မလွန်ဆန်နိုင်တာတွေ အများကြီး ရှိနေမှာ သေချာပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ - မလွန်ဆန်နိုင်ခြင်းတွေ များပြီး၊ ဆရာမ ဒုက္ခရောက်နေလေပြီ -။
မနက်ဖြန် သမီးကျောင်းက ဆရာမဆီကို ကျွန်မ လုံးဝ ထပ်သွားမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ပထမ မရလို့ ဆရာမကို ကျွန်မ စိတ်ဆိုးလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးလောကကို ဖျက်စီးပစ်နေကြတဲ့ သူတွေကို ကျွန်မ မျက်နှာချင်းမဆိုင်ချင်တော့လို့ပါ-။ သူတို့တွေရဲ့ ခြစားနေတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကို တော်တော်ကိုလည်း စိတ်ကုန် စိတ်ပျက်မိပါတယ်။
ကျွန်မ မနှစ်က တစ်နှစ်လုံး အပင်ပန်းခံပြီး အချိန်ကုန်ခံပြီး စာသင်ပေးခဲ့ရတာတွေက အဓိပ္ပာယ်လုံးဝ မရှိတော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ စာကြိုးစားမှု အနှစ်သာရက ပျောက်ဆုံးသွားပြီ။ အခု ညနေပဲ သမီးက ကျောင်းက ပြန်လာတော့ ကျွန်မ အမေကို ပြန်ပြောပြနေပါတယ်။ “မေမေ လာပြောလိုက်လို့ သမီး ဒုတိယဖြစ်သွားပြန်ပြီ” တဲ့။ ငါမကြိုးစားလည်း အမေ လုပ်ပေးရင် ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးက ဘယ်သူမှ မသင်ရပါပဲနဲ့ နုနယ်တဲ့ သမီးရဲ့ အသိစိတ်ထဲမှာ ရောက်သွားခဲ့ပြီ-။
ကျွန်မသမီး ပထမဖြစ်ရင်လည်း “ငါ့သမီးလေး တော်လိုက်တာ” လို့ - ကျွန်မ ဂုဏ်ယူစရာမှ မဟုတ်တော့တာ။ ဆရာမကို နေ့တိုင်း ထမင်းချိုင့် ထည့်ထည့်လာသော ကောင်းလေးရဲ့ အမေကရော “ငါ့သားလေး တော်လိုက်တာ”လို့ လိပ်ပြာ သန့်သန့် ဂုဏ်ယူနိုင်မည်လား။ တကယ့် အရည်အချင်း မဟုတ်ပါပဲနဲ့ ဆုပေးပွဲတွေ တက်ကြ ...။ တကယ်ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေက ဆုမချိတ်ပဲနဲ့ ကျန်ခဲ့ကြ။
ကျောင်းသားတစ်ယောက် ပထမ ဒုတိယ တတိယ ဆိုတဲ့ အဆင့်တွေဟာ ဆရာ/ဆရာမ ပါးစပ်ဖျားမှာတင် အလွယ်တကူ ဖြစ်နေခဲ့ပြီ။
adopted child မို့လို့ ကျောင်းမှာ အားငယ်မှာ စိုးရိမ်ပြီး၊ ဆရာမကို မနှစ်က တစ်နှစ်လုံး ကျွန်မ အတိုင်းထက် အလွန် သိတတ်ခဲ့တာ - မှားသွားပြီလား။
အတန်းထဲမှာ တစ်လား ၊ နှစ်လား ၊ သုံးလား .... ကျွန်မ ကလေးရဲ့ တကယ့် အရည်အချင်း အစစ်ကိုလည်း ကျွန်မ မသိနိုင်တော့။ ကျွန်မကလေးရဲ့ အခြေအနေ အမှန်ကိုပဲ ကျွန်မ သိချင်နေမိပါတော့တယ်။
12/08/2011 08:01:00 PM
ဗာတီကန်မှ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် ဘုန်းတော်ကြီး Cardinal Renato Raffaele Martino ဗာတီကန်မှ
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် ဘုန်းတော်ကြီး Cardinal Renato Raffaele Martino ကို ကြာသပတေးနေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် နံနက်ပိုင်းက
ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ စိန့်မေရီ ရိုမန်ကတ်သလစ်ဘုရားကျောင်း
တွေ့မြင်ရစဉ်။ (ဓါတ်ပုံ-မဇ္ဈိမ) ဘုရားကျောင်း နှစ် ၁ဝဝ ပြည့် ဂျူဘီလီပွဲတော် အခမ်းအနားသို့ လာရောက်သည့် ဘုန်းတော်ကြီး Cardinal Renato Raffaele Martino သည် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Pope Benedict XVI ထံမှ သဝဏ်လွှာကို
12/08/2011 07:44:00 PM
7Day News Journal ဒီဇင်ဘာ(၈/၂၀၁၁)
အတွဲ (၁၀)၊ အမှတ် (၃၈)
12/08/2011 07:35:00 PM
သခင်လှကွန်း (ခ) စာရေးဆရာမိုးညိုရဲ့ ကိုယ်ရေးအထ္ထုပတ္တိအကျဉ်း
သခင်လှကွန်းသည် အသက် (၉၀) အရွယ်၊ (၄-၁၂-၂၀၁၁) ရက်နေ့၊ နံနက် (၆း၃၀) တွင်
အမှတ် (၄၀)၊ ရန်ကင်းလမ်း၊ မြေနီကုန်း (မြောက်) ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ နေအိမ်၌ ကွယ်လွန်သည်။
(၆-၁၂-၂၀၁၁) ရပ်နေ့ (အင်္ဂါနေ့) နေ့လည် (၁၁း၀၀) နာရီတွင် ထိန်ပင် သုသာန်၌ မီးသဂြိုလ်သည်။
(၁၀-၁၂-၂၀၁၁) ရက်နေ့တွင် ရက်လည်ဆွမ်းကျွေး ပရိတ်တရားတော်နာယူမည်ဖြစ်သည်။
သခင်လှကွန်း (ခ) စာရေးဆရာ မိုးညို
- ၁၉၂၂-ခု၊ သြဂုတ်လ (၃၀) ရက်နေ့၌ အဘ ဦးဘအေး၊ အမိဒေါ်ကြည်တို့မှ မွေးဖွားခဲ့သည်။
- အမည် ဦးလှကွန်း (ဗိုလ်စိန်မောင်)။ ရေနံချောင်းအမျိုးသားကျောင်း၌ ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။
- (၁၉၃၉-ခုမှစ၍ တို့ဗညာအစည်းအရုံး မြို့နယ်ခေါင်းဆောင် သခင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
- ၁၉၄၁-ခု နောက်ပိုင်း ဗြိတိသျှ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွင် စတင် ပါဝင်လာခဲ့သည်။
- ၁၉၄၂-ခုတွင် ဘီအိုင်အေ တပ်သို့ ၀င်ခဲ့သည်။
- 1944-ခုကုန်ခါနီးတွင် အိန္ဒိယပြည်သို့ လျှို့ဝှက် သွားရောက်ကာ ရဲဘော်သိန်းဖေမြင့်၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ဗြိတိသျှ မဟာမိတ်တပ်မတော် ဦးစီးဌာနချုပ်က ဖွင့်လှစ်ပေးသော ပျောက်ကျားတပ်မှူးစစ်သင်တန်းနှင့် လေထီးဆင်းသင်တန်း ပညာများ သင်ယူခဲ့သည်။
- ၁၉၄၅-ခု ဧပြီ (၉) ရက်နေ့တွင် လေထီးဆင်းတပ်မှူးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် တပ်ကုန်းမြို့အနောက်ဘက်၌ လေထီးဆင်းခဲ့သည်။ ပါလာသော လက်နက်စုံ (၄၀၀) ဖြင့် ဂျပန်များအား PBF ပျောက်ကျားတပ်ဖွဲ့၍ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ဇွန်လ (၃) ရက်နေ့မှစ၍ စစ်ကြီးပြီးဆုံးသည်အထိ ဖြူး -ကျွဲပွဲဒေသတွင် ဆက်လက်တိုက်ခိုက်။ စစ်ကြီးပြီးသောအခါ ပြည်သူ့အာဏာဂျာနယ်၌ လက်ထောက်အယ်ဒီတာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ဘာသာပြန်အဖွဲ့အကြီးအကဲ (တောတွင်း)။
- ၁၉၆၂-ခုမှစ၍ အလင်းဝင်ပြီးနောက် သတင်းစာဆရာဖြစ်လာသည်။ ၁၉၆၃-ခုမှစ၍ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်သတင်းစာများတွင် နိုင်ငံခြားသတင်းအယ်ဒီတာနေရာမှ စတင်ကာ အယ်ဒီတာ ချုပ်ဖြစ်လာသည်အထိ (၁၃) နှစ်ကြာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ပြည်ထဲရေးဌာန လွတ်လပ်ရေး မော်ကွန်းကော်မတီ၏ ဆပ်ကော်မတီဝင်။
- လွတ်လပ်ရေးမော်ကွန်းဝင် (ပထမဆင့်)နှင့် နိုင်ငံဂုဏ်ရည်ဘွဲ့ (ဒုတိယဆင့်) ချီးမြင့်ခံယူရရှိခဲ့သည်။ ဆောင်းပါးပေါင်း ပုဒ်ရေ (၂၀၀) ကျော်နှင့် ၀တ္ထုတို/ရှည်များ၊ ၁၉၄၅ -ခုနှစ်နောက်ပိုင်း၌ “မိုးညို“ အမည်ဖြင့် ရေးသားခဲ့သည်။ ဘာသာပြန် (၆) အုပ်၊ ပင်ကိုယ်ရေး (၂) အုပ်ရေးသားခဲ့ပြီး မိုးဂျာနယ်နှင့် အခြားမဂ္ဂဇင်းများတွင်လည်း ရေးသားခဲ့သည်။
(၂၀၁၀) မတ်လ နောက်ဆုံးထုတ် စာအုပ်မှာ “စစ်ရေးတာဝန်ခရီးမှ ပုံရိပ်များ“ စာအုပ်ဖြစ်သည်။
- ဇနီး ဒေါ်ခင်ဆွေ (၁၉၉၃- ကွယ်လွန်) နှင့် အိမ်ထောင်ကျပြီး သားသမီး (၅) ဦး ထွန်းကားခဲ့သည်။
12/08/2011 07:25:00 PM
သခင်လှကွန်းရဲ့ ရုပ်ကလာပ်ကို နောက်ဆုံး ဂါရဝပြု နှုတ်ဆက် (ရုပ်/သံ)
သခင်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး လေထီးရဲဘော်ဟောင်းလဲဖြစ်
သတင်းစာဆရာတစ်ဦးလဲ ဖြစ်တဲ့ စာရေးဆရာမိုးညို (ခ) သခင်လှကွန်းဟာ ဒီဇင်ဘာလ ၄
ရက်နေ့က ကွယ်လွန် အနိစ္စ ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သခင်လှကွန်းဟာ အမှတ် ၄၀ ရန်ကင်းလမ်း မြေနီကုန်း မြောက်ရပ်ကွက် စမ်းချောင်းမြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့ နေအိမ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက် ၉၀ ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ သခင်လှကွန်းရဲ့ ကြွင်းကျန်ရစ်တဲ့ ရုပ်ကလာပ်ကို ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁ နာရီက ထိန်ပင်သုသာန်မှာ မီးသဂြိုလ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီဈာပနအခမ်းအနားကို ဆရာမောင်စူးစမ်း၊ သခင်တင်မြ၊ ဦးချစ်လှိုင် စတဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ စာနယ်ဇင်း အသိုင်းအဝိုင်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာ မြောင်းမြသခင်စိုးမြင့်ရဲ့ သားဖြစ်တဲ့ ဦးမောင်မောင်မြင့်မှ အခမ်းအနားမှုးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ကွယ်လွန်သူ သခင်လှကွန်းရဲ့ ကိုယ်ရေးအထ္ထုပတ္တိကို ဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် သခင်လှကွန်းရဲ့ ရုပ်ကလာပ်ကို နောက်ဆုံး ဂါရဝပြု နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ သခင်လှကွန်းရဲ့ ရက်လည်ဆွမ်းကျွေး ပရိတ်တရားတော် နာယူမယ့်အစီအစဉ်ကို သူ့ရဲ့နေအိမ်မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။
12/08/2011 07:23:00 PM
- ၁၉၄၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၄၅ ခုနှစ်အထိ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (BIA)၊ ဗမာ့ကာကွယ်ရေး တပ်မတော် (BDA)၊ ဗမာ့မျိုးချစ်တပ်မတော် (PBF) တို့တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ BDA ပထမအပတ် ဗိုလ်သင်တန်းဆင်း၊ ဂျပန်ပြည် ဘုရင့်တပ်မတော် စစ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းဆင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိဖြစ်လာပြီး ၁၉၄၆-၅၈ ခုနှစ်တွင် သနက(၅)၊ အမှတ် (၇) ခြေလျင်
တပ်ပေါင်းစုဌာနချုပ်၊ ကချင် (၁)၊ ခမရ (၁ဝ၄) တို့တွင် ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်အထိ
- ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ဖြင့် စစ်သံမှူး (အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု)၊
၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် လပခ ဒုတိယတိုင်းမှူး၊ ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ရတခ တိုင်းမှူး၊ ၁၉၆၉
ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားစီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ၁၉၇၁ တွင် တပ်မတော်မှ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ အလုပ်ဝတ္တရားများကို ပြန်လည်အပ်နှံခွင့်ပြုခဲ့။
ဦးလွင် ရဲ့ ဈာပနအခမ်းအနား (ရုပ်/သံ)
အတွင်းရေးမှုးဟောင်းဖြစ်တဲ့ ဦးလွင်ရဲ့ ဈာပနအခမ်းအနားကို ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၈
ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁း၃၀ က ရေဝေးသုဿန်မှာ ပို့ဆောင်မီးသဂြိုလ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ ည ၈း၄၀ အချိန်က လူကြီးရောဂါနဲ့ အမှတ် (၁၅ A) ကမ္ဘောဇရိပ်သာ နေအိမ်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက် ၈၈ နှစ် ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဦးလွင်ရဲ့ဈာပနကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေမှ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ပြည်ပ သံတမန်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းက မိတ်ဆွေတွေ စုံစုံလင်လင် လာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ မိတ်ဆွေတွေက လွမ်းသူ့ပန်းခြင်းတွေ၊ ပန်းခွေတွေ အသီးသီးပို့ဆောင်ပြီး ဦးလွင်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကို လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဦးလွင်ဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကတည်းက
ပါတီတွင်း ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးမှာ တတပ်တအား ကြိုးစားခဲ့သူဖြစ်ပြီး ၁၉၉၁ မှ ၉၅ ခုနှစ်အထိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာ အတွင်းရေးမှုးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အေးမြတ်ထက်(Burma VJ Media Network)
ကြံ့ဖွံ့ပါတီအတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်သောင်းက မန္တလေးမြို့သို့ စည်းရုံးရေးဆင်းဖို့ စီစဉ်
(၁) ဝန်ကြီးဟောင်းဖြစ်တဲ့ ပြည်ထောင်စု ကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်သောင်း မန္တလေးမြို့ ဈေးချိုတော်ကို လာရောက်လည်ပတ်မယ့်ကိစ္စအပေါ် ကြိုဆိုဖို့ စီစဉ်ရန်အတွက် ဈေးချိုတော်ဧရိယာ အကျိုးဆောင်အဖွဲ့တွေကို မန်းမြန်မာ ပလာဇာမှာ ယခင် ဈေးချိုတော်ဥက္ကဌဖြစ်တဲ့ ဦးဥာဏ်ဝင်းနဲ့ ဦးခင်မောင်ဦး တို့က ခေါ်ယူ၍ ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့က အစည်းအဝေးတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဓိက ဒီအစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ရတာကတော့ ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်းလာတာကို ကြိုဆိုဖို့ စည်းရုံးရေးဆင်းတာသာ ဖြစ်ပြီး ကြိုဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့  ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလည်း လက်ရှိဈေးချိုတော် အကျိုးတော်ဆောင်တွေကသာ ကျခံခိုင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်းဟာ ပြည်ထောင်စု ကြံခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်အဖြစ်နဲ့ စည်းရုံးရေးဆင်းဖို့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် အကျိုးဆောင်အဖွဲ့တွေက ကြိုဆိုဖို့အတွက် ဆန္ဒမရှိဖြစ်နေကြတာပါ။
ဒါပေမဲ့ အစည်းအဝေးမှာတော့ သူတို့ရဲ့လက်ရှိအာဏာတွေကို ကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက် အစည်းအဝေးမှာ မတင်ပြရဲကြဘဲ ငြိမ်ခံနေခဲ့ကြတဲ့အပြင် ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်း လာရောက်လည်ပတ်မယ့် နေ့ရက်ကိုလဲ အတိအကျ မသိရပါဘူးလို့ ဈေးချိုတော် အကျိုးတော်ဆောင်တဦးက ဆိုပါတယ်။
ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်းဟာ အခုအခါမှာ ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပြီး အဲဒီကနေ အပြန်မှာ မန္တလေး ဈေးချိုကို လွမ်းလို့ လာချင်တယ်လို့ ပြောတဲ့အတွက် ဦးဥာဏ်ဝင်းနဲ့ ဦးခင်မောင်ဦးတို့က အခုလိုမျိုး ကြိုဆိုပွဲ ပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဥာဏ်ဝင်းဟာ အရင်တုန်းက ဈေးချိုတော်ရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်ထောင်စု ကြံခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကနေ ဝင်ပြိုင်တဲ့နေရာမှာ ရှုံးနိမ့်ထားတဲ့အဖွဲ့က ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် သူတို့က ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအတွက် စည်းရုံးရေးဆင်းတဲ့အနေနဲ့ ကြိုဆိုပွဲကို ပြုလုပ်ချင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကို ဈေးချိုတော် အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့တွေက မသုံးချင်ကြပါဘူး။
"ဥပမာ - ကျွန်တော်တို့ နှစ်သက်တဲ့ အမကြီး လာရင် အခုလို ဘုံအနေနဲ့ အကုန်လုံးက ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ စီစဉ်ပေးမှာလား။ အမကြီးကို ကျွန်တော်တို့က ဖိတ်ပြီးတော့
အမကြီးလာရင် အခုလို ခွင့်ပြုမိန့်ပေးမှာလား ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့က မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိပါတယ်။ သူတို့က သူတို့လုပ်ချင်တာကို ပြောတာ၊ ကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့ လုပ်ချင်တာကို တောင်းဆိုတာပါ"လို့ သူတို့ရဲ့သဘောထားကို ဈေးချိုတော်အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ဘားမားဗီဂျေကို ဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
12/08/2011 07:00:00 PM
နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားမြို့တွင် အဟောင်းထည် (ဘေထုတ်) အရောင်းဆိုင်များ အထူးစည်ကားလျက်ရှိ
နေပြည်တော်ပျဉ်းမနားတွင် လမ်းဘေးဟောင်းအထည် (ဘေထုတ်) ရောင်းဈေးဆိုင်များ ရောင်း အားကောင်းလျက် ညပိုင်းများတွင် အထူးစည်ကားလျက်ရှိနေသည်ကို တွေ့မြင်ရသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ၊ တတိယပတ်ခန့်မှစ၍ နေပြည်တော်ခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များတွင် နံနက်ပိုင်း၊ ညပိုင်းများ၌ အအေး ဓာတ်ပိုမိုလာကြောင်းနှင့် ထိုကဲ့သို့အအေးဓာတ်ပိုမိုမှုများကြောင့် ဒေသခံပြည်သူများ အနွေးထည်၊ လက်ရှည် အင်္ကျီများဝတ်ဆင်မှု များလာကြသည်။ မြို့တွင်များရှိအထည်ဆိုင်များ၊ စတိုးဆိုင်ကြီးများတွင်လည်း ဂျာကင်၊ ကုတ်၊
ဆွယ်တာ စသော အနွေးထည်မျိုးစုံ ခင်းကျင်းချိတ်ဆွဲ၊ ရောင်းချမှုများ အပြိုင်ဖြစ်လာကြသည်။ လမ်း ဘေးပျံကျဟောင်း ပုံရောင်းသူများလည်း နေရာအနှံတွေ့မြင်ရသည်။ ပျဉ်းမနားမြို့ ယခင်လဟာပြင်ညဈေး တန်းကြီး အနောက်ဘက်
တိုက်တန်းများရှေ့တွင် ည (၇) နာရီခန့်မှစ၍ ည (၉) နာရီခန့်ထိ အဟောင်းအထည် အရောင်းဆိုင်များ ၀ယ်ယူအားပေးသူများနှင့် အထူးစည်ကားနေသည်။ " အဟောင်းအထည်ဆိုပေမဲ့ ဖွတ်လျှော် သန့်စင်ပြီး မီးပူထိုးထားလိုက်လျှင် အလှူမင်္ဂလာပွဲတိုးလို့ရပါတယ်။ အထည်အသစ်တွေက ဈေးကြီးတော့ အသစ်ဆိုင်တွေကို လူတိုင်းမကပ်နိုင်ဘူး" ဟု အဟောင်းအထည်ဝယ်ယူတစ်ဦးမှ ပြောသည်။ ဂျာကင် အနွေး
ထည် ၀ယ်သူ တစ်ဦးကလည်း ယခု ဒီဂျာကင်က ၄၀၀၀ ပဲပေးရတယ်။ စတိုးဆိုင်တွေမှာ ၈၀၀၀ ကျော်ရှိတယ်။ ဈေးချိုလို့ ၀ယ်လာတာ အသစ်အတိုင်းပါပဲ" ဟု သူဝယ်လာသော ဂျာကင်အင်္ကျီကို ပြသည်။ မရှိဆင်းရဲသားတွေ ဆောင်းတွင်းဝတ် အနွေးထည်တွေ ၀ယ်မယ်ဆိုရင် လမ်းဘေးအဟောင်းအထည် (ဘေထုတ်) ဆိုင်များမှာ အ ဆင်ပြေတယ်ဟု ဒေသခံပြည်သူတစ်ဦးမှ ပြောသည်။
N/A - အတွဲ၂ အမှတ် ၆၉
12/08/2011 06:27:00 PM
ဒီဇင်ဘာလ ၆ရက်နေ့ ညပိုင်းက ကွယ်လွန်ခဲ့သော ဦးလွင် (အသက် ၈၈နှစ်၊ အတွင်းရေးမှူး၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်)ကို ဒီဇင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁နာရီ ၃၀မိနစ်က ရေဝေးသုဿန်၌ မီးသဂြိင်္ူလ် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
12/08/2011 06:13:00 PM
တရုတ်ပြည်၊ Si chuan (စီချွမ်)ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ မူးနေတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူမိန်းကလေးတစ်ယောက်က ကပွဲမှာယောကျာင်္းလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ရကာနေ ဟိုတယ်ကိုသွားဖို့သဘောတူကာလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဟိုတယ်ရောက်တော့လဲ အရက်ထပ်သောက်ခဲ့ပြီး အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ နှိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ သူမဟာရေခဲတွေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့ကန်ထဲကိုရောက်နေခဲ့တယ်။ “ နံပတ်၁၂၀ ကိုဖုန်းဆက်ပါ၊ မဟုတ်ရင်နင်သေလိမ့်မယ်” လို့ရေးထားတဲ့စာတစ်စောင်ကို ကန်ရဲ့ဘေးနားမှာတွေ့ခဲ့တယ်။ သူမရဲ့ဖုန်းကိုလဲ အဲ့စာရဲ့ဘေးနားမှာပဲတွေ့ခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့သူမကဖုန်းဆက်ပီးအခုအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြတော့ ဆရာဝန်က သူမရဲ့နောက်ကျောဘက်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ဖို့ အကြံပေးခဲ့တယ်။ စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ နောက်ကျောဘက်အောက်ဘက်နားလောက်မှာ ၉လက်မရှည်တဲ့ဒါဏ်ရာအပေါက်၂ခုကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ ဆရာဝန်က သူမကိုချက်ချင်းပဲ ရေခဲကန်ထဲကိုပြန်သွားပြီး မလှုပ်ရှားပဲနေဖို့ပြောလိုက်ပြီး၊ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ သူမက ကျောက်ကပ်အခိုးခံလိုက်ရတာပါ။ ဒါဏ်ရာအပေါက်၂ခုကတော့ ကျောက်ကပ်ထုတ်ယူတုန်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါဏ်ရာပါ။ မှောင်ခိုဈေး(တရားမ၀င်ဈေး) မှာ ကျောက်ကပ်တစ်လုံးဟာ ယွမ်၃သိန်းတန်ပါတယ်
မိန်းကလေးသောက်ခဲ့တဲ့ အရက်ထဲမှာ မူးယစ်ဆေးတင်မကပဲ ထုံဆေးတစ်မျိုးပါ ပါဝင်နေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပြီးတော့ ရေခဲဟာလဲအသားကိုထုံကျင်စေထားတဲ့အတွက် အခိုးခံရတဲ့သူဟာ ကျောက်ကပ်အခိုးခံနေရစဉ်မှာ နာကျင်မှု့မခံစားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်ကပ်အခိုးခံရတဲ့မိန်းကလေးကတော့ ဆေးရုံပေါ်မှာပဲကျောက်ကပ်အလှူရှင်ကိုစောင့်ရင်း ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးကျောက်ကပ်ခိုးယူမှု့ဟာ ခုမှပေါ်လာတဲ့ပြစ်မှု့ကျူးလွန်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေ၊ ခရီးသွားတွေ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာ အဓိကပစ်မှတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ ရဲတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီလိုမျိုး အမှု့အခင်းတွေဟာ မြို့ကြီးများမှာပိုဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်လို့လဲ ရဲတွေကသတိပေးထားပါတယ်။
Hnin Thazin Aung (facebook)
12/08/2011 09:33:00 AM
မြန်မာကို ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများပြန်ပေးမည်ဟု တောင်ကိုရီးယားကြေညာ
(AP သတင်းဌာနမှ6Dec 2011 ရက်စွဲပါ Seoul to resume development assistance to Myanmar ကို ဘာသာ ပြန်ဆိုသည်)
မြန်မာနိုင်ငံကို ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအကူအညီများ ပြန်လည်ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း Yonghup သတင်းဌာန က ရေးသားဖော်ပြသည်။ တောင်ကိုရီးယားသည် လွန်ခဲ့သည့် ခြောက်နှစ်တာကာလ၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ကူညီထောက်ပံ့မှုများရပ်ဆိုင်းခဲ့ရာမှ ယခုအခါတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ချေးငွေများပေးအပ်သွား မည် ဟု ကမ်းလှမ်းလာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ယင်းသတင်းကဖော်ပြသည်။
ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိတစ်ဦးအဆိုအရ ချေးငွေအစီအစဉ် အကောင်အထည် ဖော်ရန် နှစ်ဖက် စလုံးက ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အကျိူးအမြတ်ပိုမိုဖြစ်ထွန်းနိုင်အောင် မည်သည့်နယ်ပယ်နှင့် အခန်းကဏ္ဍများကို ရွေးချယ်မည်ဟူသောအချက်ကို ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်သွားမည်ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ လေ့လာအကဲခတ်သူများအဆိုအရ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် တောင်ကိုရီးယားအစိုးရ၏ ငွေကြေး
ထောက်ပံ့မှု ပြန်လည်စတင်ခြင်းသည် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အရေးကိစ္စများနှင့် ဆန့်ကျင်လျက်ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံကို ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများ မရပ်ဆိုင်းမီကာလများအတွင်း ဒေါ်လာ သန်း ၁၂၀ နှင့်ညီမျှသော အကူအညီနှင့် ထောက်ပံ့ကြေးများပေးအပ်ခဲ့သည်။ ယခုလို တောင်ကိုရီးယားအစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများပေးမည်ဟူသော ကြေညာချက်မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန် မြန်မာနိုင်ငံသို့သွားရောက်ကာ နိုဗယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်သည့်သလို မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားမှုများလည်းရှိသည်။ မြန်မာသည် မြောက်ကိုရီးယာနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဒုံးကျည်လက်နက်များ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပြီး နျူကလီးယားလက်နက်များ တပ်ဆင်ရန်လည်း ကြိုးပမ်းလျက် ရှိသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
နျူကလီးယားမပြန့်ပွားရေးအရေးကိစ္စများနှင့် အတူ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကျိုးစီးပွားများလည်း ရှိနေသည်။ တောင်ကိုရီးယားလုပ်ငန်းအတော်များများမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းရေးစီမံကိန်းများတွင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ ယင်းပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းများ အနက် တောင်ကိုရီးယားဒေဝူးအင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက်က ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့ တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်လျက် ရှိပြီး အစုရှယ်ယာ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းတိတိရယူထားသည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဟွန်ဒိုင်းအကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းက ဒေဝူးနှင့် ဒေါ်လာ ၁ ဒဿမ ၄ ဘီလီယံတန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး ယင်းရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့တူးဖော်ရေးစီမံကိန်းတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်လျက် ရှိသည်။ လက်ရှိအနေအထားတွင် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လာမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည်။ သူမ၏ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) သည်လည်း တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ လစ်လပ်လျက် ရှိသော အမတ်နေရာ ၄၈ ခုအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။
YC Myanmar News Now
12/08/2011 09:07:00 AM
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစာရင်းအား အများပြည်သူထံ ဖြန့်ဝေမည်
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားဟောင်း ဦးတိုးကျော်လှိုင်
အကျဉ်းထောင် အသီးသီး၌ အကျဉ်းကျနေသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၇၀၀ ကျော်စာရင်းအား ပြုစုကာ အများပြည်သူထံ ဖြန့်ဝေမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါစာရင်းအား ပြုစုနေသူ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားဟောင်း ဦးတိုးကျော်လှိုင်က ပြောကြားသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ထံသို့လည်း တင်ပြမည်ဖြစ်ကာ အများပြည်သူ သိရှိစေနိုင်ရန်အတွက် လူသွား၊လူလာများသည့် နေရာများတွင် ကပ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မကပ်နဲ့ဆိုတဲ့ နေရာမှာ မကပ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုတွေ သွားလာတတ်တဲ့ နေရာတွေ၊ အမေရိကန် စင်တာတွေမှာ ကပ်ထားမှာပါ”ဟု ဦးတိုးကျော်လှိုင်က ဆိုသည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစာရင်းသည် အခြားသော အဖွဲ့အစည်းများက ပြုစုနေသည့် စာရင်းနှင့် တူညီမှုမရှိသော်လည်း အနီးစပ်ဆုံး၊ အမှန်ကန်ဆုံး ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ထားပါကြောင်း ဦးတိုးကျော်လှိုင်က ထုတ်ဖော် ပြော ကြားသည်။
ထုတ်ပြန်သည့် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံ နေရသူများ စာရင်းတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၅၉၁ ယောက်သည် အကျဉ်းထောင်များတွင် ဆက်လက်ကျန်ရှိနေကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဘယ်နှယောက် လွှတ်ပေးတယ်ဆိုတာ သိရဖို့ တိကျတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား စာရင်းရှိဖို့ လိုပါတယ်”ဟု နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မိသားစုဝင် တစ်ဦးက ပြောသည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၅၀၀ ကျော်ရှိမယ် ဆိုတာ သေချာပါတယ်”ဟု အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းက မြန်မာနိုင်ငံရှိ အကျဉ်းထောင်များတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား တစ်ထောင်ကျော် ကျန်ရှိကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
12/08/2011 08:59:00 AM
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ NLD မှ လူငယ်နှင့် တိုင်းရင်းသားများသာ အဓိကယှဉ်ပြိုင်မည်
လစ်လပ်နေရာ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းမည့် လာမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီမှ လူငယ်နှင့် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသာ အဓိကထား ယှဉ်ပြိုင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ မူဝါဒများအတိုင်း လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးကဏ္ဍတွင် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ၌ လူငယ်နှင့် တိုင်းရင်းသားများကိုသာ အဓိကထား ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်စေမည် ဖြစ်ကြောင်း NLD ပါတီမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ဗပိာုအစည်းအဝေးခေါ်ယူကာ ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေးနှင့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရေးအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ ပါတီတည်ထောင်ခွင့် မှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
(NLD) ပါတီသည် လာမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွှတ်တော်တွင်း လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် (၄၈) နေရာလုံး၌ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လာမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ NLD ပါတီ၏ အထွေအထွေအတွင်းရေးမှူး လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကော့မှူးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဝင်ရောက်ယှဉ် ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်အသုံးပြုလာသည့် ခမောက်တံဆိပ်အစား ခွပ်ဒေါင်း တံဆိပ်ကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အရှုံးပေါ်နေသည့် မြန်မာ့အသေးစားချေးငွေရုံးခွဲ ၃၁ ရုံးပိတ်မည်
ပြည်တွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တစ်ခုတွင် ဘဏ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေစဉ်
တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးရှိ ဝင်ငွေလျာထားချက် ပြည့်မှီခြင်းမရှိဘဲ အရှုံးပေါ်နေသည့် ရုံးခွဲ ၃၁ ရုံးကို ပိတ်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ပိတ်သိမ်းရတော့မည့် မြန်မာ့အသေးစားချေးငွေရုံးခွဲများမှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ရုံးခွဲတစ်ရုံး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရုံးခွဲတစ်ရုံး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ
ရုံးခွဲတစ်ရုံး၊ မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ရုံးခွဲတစ်ရုံး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ရုံးခွဲ သုံးရုံး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရုံးခွဲ ၁၃ ရုံးနှင့် ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရုံးခွဲရှစ်ရုံးတို့ပင်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ့အသေးစားငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
မူဝါဒများအရ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ကျရေး အစီအမံနှင့်အညီ အသေးစား ချေးငွေလုပ်ငန်းများအပြင် အသေးစားငွေရေး၊ ကြေးရေး လုပ်ငန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး တာဝန်များကိုပါ ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပုဂ္ဂလိက ငွေစုငွေချေး လုပ်ငန်းများကိုလည်း တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကျယ်ပြန့်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ဥပဒေ၊ အခြေခံမူနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ တိတိကျကျ မရှိသည့်အတွက် အခက်အခဲ များစွာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်း ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ငွေချေးလုပ်ငန်းများတွင် ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့သည့်အတွက် နိုင်ငံတော်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် အခြေခံ လူတန်းစားများအတွက် အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်း ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
12/08/2011 08:33:00 AM
အစိုးရကို အတိုက်အခံပြု ဆန့်ကျင်လာခဲ့သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့က ပါတီမှတ်ပုံတင်ရန်နှင့် လာမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် နေရာပြည့်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်က မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို ကြီးမားသော အချိုးအကွေ့ကြီးတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပြီး ပြည်သူလူထုနှင့် NLD အပေါ် သြဇာကြီးသည့် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်လည်းဖြစ်၍ ကန့်ကွက်မှု မဆိုစလောက် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်မှလွဲ၍ ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးနှင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုး၊ တ.စ.ညအပါအဝင် နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးက ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။ ပြည်သူလူထုနှင့်
နိုင်ငံတကာက စိတ်ဝင်စားသည့် ကိစ္စမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မဝင်ဟူသည့် အချက်ဖြစ်ပြီး ယခုနောက်ဆုံး ရရှိသော သတင်းများအရ လူထုခေါင်းဆောင်သည် ကော့မှူးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တော့မည်ဟု အတည်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ NLD မှတ်ပုံတင်စဉ်ကပင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်သင့် မဝင်သင့်ဆိုသည့် သဘောထား မှတ်ချက်များ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယခု သူမကိုယ်တိုင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဖြစ်ရာ ထိုသို့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းဖြင့် မည်သို့သော အကျိုးဆက်များ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသနည်း၊ မည်သည့်နေရာကဝင်ပြိုင်သင့်သနည်း၊ မည်သည့်တာဝန်ကို ယူသင့်သနည်းဟူသည့် စဉ်းစားဖွယ် အချက်များလည်း ရှိလာခဲ့သည်။
ကော့မှူးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တော့မည်ဖြစ်ရာ သူမအနေဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ထဲ ရောက်လာလျှင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အကျိုးဆက်ကို စဉ်းစားရပေတော့မည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် အဓိက ဦးဆောင်နေသူမှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသည် အပြောင်းအလဲကို အမှန်တကယ်ပြုလိုသူဟု ယူဆရပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းသည့် ကိစ္စတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်များ၏ ကန့်ကွက်မှုကြောင့် ထိုအဆိုပျက်ပြယ်နိုင်မည့် အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းပြီး အကောင်းဆုံး အဖြေရအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ လွှတ်တော်တွင် သူလာခဲ့ပါတီဖြစ်သည့် ပြည်ခိုင်ဖြိုး၏ လွှမ်းမိုးမှုမရှိစေရန် နှင့် လွှတ်တော်များ၏ အသက်ဝင်မှု ကိုလည်း အထူးအလေးထား တည်ဆောက်နေသူဖြစ်သည်။ ထိုသို့
တည်ဆောက်သည့်အခါတွင် တစ်ခါ တစ်ရံ အမိန့်ပေးစနစ်ဖြင့် ကျင့်သုံးလိုက်ရသည် များလည်း ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ခုနှစ်ခန့်မှစ၍ အမိန့်ပေးစနစ်ဖြင့် ယဉ်ပါးအသားကျလာခဲ့သော မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် လွတ်လပ်စွာ ငြင်းခုံခွင့်ကို ပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးမချနိုင်ဘဲ လိုရာမရောက်ဖြစ်မည့် အခြေအနေများလည်း ရှိနေပေရာ တစ်ခါတစ်ရံတွင် လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲခွင့်ဆိုသည့် အချက်များကို လျစ်လျူရှုလိုက်ရသည်များလည်း ရှိပါသည်။ အထက်ကဆိုခဲ့သော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေးကိစ္စတွင် သူရဦးရွှေမန်းအနေဖြင့် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ ကို ထောက်ခံစေခြင်း၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်များ စောဒက မတက်နိုင်စေရန် အပိတ်မေးခွန်းဖြင့် အတည်ပြုလိုက်ရခြင်းတို့မှာ ထင်ရှားမြင်သာ သည့်ကိစ္စပင်ဖြစ်သည်။
Moral Person ဖြစ်သည်။ သူမအနေဖြင့် စာအုပ်ကြီးအတိုင်းဟု မဆိုနိုင်စေကာမူ ဒီမိုကရေစီ၏ အနှစ်သာရကို အလေးပေးသူဖြစ်မည်မှာ သေချာသည်။ ထို့ကြောင့် သူမအနေဖြင့် ဒီမိုကရက်တစ်ရှုထောင့်မှ တသွေမတိမ်း ရပ်ခံ၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အတွင်း၌ ဦးရွှေမန်းနှင့် ပါဝါချင်း ယှဉ်ပြိုင်လာရလျှင် လွှတ်တော်အတွင်း၌ ပါဝါကြီးသည့် ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦး ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုကြောင့် လိုရာမရောက်ဘဲ ပြည်ခိုင်ဖြိုးနှင့် ဒီမိုကရက် အားပြိုင်မှုက ပိုမိုကြီးမားလာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ဆိုရလျှင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးကို မျက်နှာသာမပေးသော ဦးရွှေမန်းသည် သူ၏ ပါဝါကို တည်ဆောက်ရန် ပြည်ခိုင်ဖြိုးဘက်
ပြန်လည်ရောက်သွားနိုင်စရာရှိသည်။ ထိုသို့ထိပ်သီးနှစ်ဦး ပါဝါပြိုင်မှုက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို အင်အားချိနဲ့သွားစေမည်ဖြစ်သလို တစ်ဖက်တွင်လည်း အမျိုးသားလွှတ်တော်ကို အားကောင်းသွားစေနိုင်သည်။ ထို့ပြင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့်လည်း တစ်ဖက်က ဦးရွှေမန်း တစ်ဖက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုသည့် ထိပ်သီးနှစ်ဦးကြောင့် ယင်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍများ ကျုံ့ဝင်သွားနိုင်သလို ရေငုံနှုတ်ပိတ် ဘဝမျိုးအထိ ရောက်သွားနိုင်ဖွယ်ရှိကာ အကယ်၍ ဦးရွှေမန်းကသာ ၎င်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အသုံးချ၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ခေါ်ယူခြင်းမပြုရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်လျှင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ ထိုးကျသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ လူထုခေါင်းဆောင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အတွင်း ဝင်လာခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ဆိုးကျိုးဖြစ်သည်။
ဦးရွှေမန်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့မှာ မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်များအဖြစ် အခြေအနေကို ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်သွားကြ မည်ဆိုပါလျှင်မူ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပို၍ ကြီးမားလာနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဦးရွှေမန်းက ပြည်ခိုင်ဖြိုးကို ထိန်းကျောင်း၍လည်းကောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီမိုကရက်ပါတီများကို ထိန်းကျောင်း၍လည်းကောင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အခြေအနေပေါ် ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်း လုပ်ဆောင် သွားကြမည်ဆိုလျှင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကို အားပြိုင်ထားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေ ဖြင့် ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေမျိုးကို လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ ဥပမာ ဆိုရလျှင် မြစ်ဆုံကိစ္စကို အကြီးအကျယ် ကန့်ကွက်ခဲ့သော်လည်း ဦးသိန်းစိန်နှင့် တရုတ်ပြည်အကြား ပြဿနာမတက်စေရန် ကျောက်ဖြူရေနက် ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းကို မသိကျိုးကျွံပြုပေးခဲ့သည်။ တစ်ဖက်တွင်လည်း သူမနှင့်ရင်းနှီးသော အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနှင့် ဆက်ဆံရေးပြန်လည် စတင်နေပြီဖြစ်သည့်တိုင် နိုင်ငံမနာစေရန် တရုတ်ပြည်နှင့် ဆက်ဆံရေးလည်း အရေးကြီးကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် Morality ရှုထောင့်ထက် အခြေအနေကို ကြည့်၍ အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြောင်း ပြသနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုရလျှင် သူမအနေဖြင့် မည်သည့်အချိန် တွင် တင်းရမည်၊ မည်သည့်အချိန်တွင် လျော့ရမည်ကို ကောင်းစွာ သဘောပေါက် ထားပုံလည်းရသည်။ ထို့ကြောင့် လွှတ်တော်ထဲတွင် ဦးရွှေမန်းနှင့် သူမသာ ဟန်ချက်ညီညီ ဆောင်ရွက်နိုင်လျှင်တော့ များစွာ အကျိုးရှိပါလိမ့်မည်။
ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်မှာ အပြောင်းအလဲနှင့် ဒီမိုကရေစီအကြောင်း တွင်တွင်ပြော၍ မီဒီယာစာမျက်နှာများ ပေါ်တွင် နေရာယူလာသော်လည်း အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲရန် ဆန္ဒရှိမရှိမှာ သံသယဖြစ်ဖွယ်အနေအထား၌ ရှိနေသေးသည်။ မကြာမီက ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုလိုက်သည့် ဥပဒေတစ်ခုကို သမ္မတ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမပြုမီ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရုံးသို့ ပေးပို့ ရမည်ဟူသည့် ဥပဒေတစ်ခုကို ၎င်း၏ သဘောတစ်ခုတည်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ပြည်ခိုင်ဖြိုးနှင့် ဒီမိုကရက်ပါတီများ ပူးပေါင်း၍ ကန့်ကွက်ခဲ့ရသည်။
၎င်းအနေဖြင့်လည်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို အားပျော့ရန် စီစဉ်ထားသည့် ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းလိုက်ရသည်။ ဆိုရလျှင် တစ်ဖက်၌ ဦးရွှေမန်းက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို တည်ဆောက်နေသကဲ့သို့ ဦးခင်အောင်မြင့်သည်လည်း သူ၏ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကို တည်ဆောက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် အားပြိုင်မှုတွေရှိလာပြီး အထက်က ဦးခင်အောင်မြင့် တင်သွင်းသည့် ဥပဒေကြမ်းမှာ ပြိုင်ဘက်ကို ခြေထိ်ုးခံသည့် မမျှတသည့် ယှဉ်ပြိုင်မှုမျိုးဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာ အမျိုးသားလွှတ်တော်ထဲ ရောက်သွားပါက Moral Person ဖြစ်သော သူမသည် ဦးခင် အောင်မြင့်၏ လက်ခံနိုင်စရာမရှိသော လွှမ်းမိုးမှုများကို ထိန်းသိမ်းရန် ကြိုးစားမည်မှာသေချာသည်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသ ကြီးအသီးသီးမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အရေအတွက် အတူတူဖြစ်၍ ပါတီတံဆိပ်ထက် မိမိတို့ ဒေသအရေးကို ပိုမို အလေး ပေးဖွယ်ရှိသဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘက်မှ ထောက်ခံမည့်သူမှာ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များပါ ပါဝင်လာနိုင်သည်။ သူမ အနေဖြင့် ဦးခင်အောင်မြင့်နှင့် အားချင်းပြိုင်မှုကြောင့် ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုအတွက် အဆိုတစ်ခုအတွက် အငြင်းပွားလာရလျှင်ပင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်၌ မဲခွဲဆုံးဖြတ်သည့်အခါ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကပါ သူမဘက်က ရပ်ခံပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် သူမအနေဖြင့် အမျိုးသား လွှတ်တော် အတွင်း ရောက်ရှိခဲ့ပါက ဦးခင်အောင်မြင့်အနေဖြင့် သူမနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်သာ
ရှိပါတော့သည်။ အကယ်၍ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မည် ဆိုပါက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကပါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နောက်တွင် ရှိနေမည်ဖြစ်ရာ ဦးခင်အောင်မြင့်အနေဖြင့် စိတ်ကြိုက် ခြယ်လှယ်နိုင်မည့် အခြေအနေမရှိတော့သည်မှာသေချာသည်။ ထို့ကြောင့် လူထုခေါင်းဆောင် အနေဖြင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဆုံးဖြတ် ခြင်းကသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
ဦးခင်အောင်မြင့်ရော ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္က သူရဦးရွှေမန်းရောပါ အပြောင်းအလဲပြုလုပ်လိုသည်မှာ သေချာသော်လည်း ထိုကဲ့သို့ ကောင်းမွန်သော အပြောင်းအလဲကို သူလုပ်မည် ငါလုပ်မည်ဟု အငြင်းပွားနေသည့် ပြဿနာဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အငြင်းပွားရင်းမှ တစ်ဦး၏ အခန်းကဏ္ဍကို တစ်ဦးက ယှဉ်ပြိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် လွှတ်တော်နှစ် ရပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး အကျိုးရှိမည့် ဥပဒေများ ဖြစ်ပေါ်လာရန် အလားအလာရှိပါလျှက် ပါဝါချင်းယှဉ်နေမှုကြောင့် လိုရာမရောက်ဖြစ်နေရ သည်ကို တွေ့ရပြီး အထက်က ဦးခင်အောင်မြင့် တင်သွင်းသည့် ဥပဒေမှာ အထင်ရှားဆုံးဖြစ်ကာ
အခန့်မသင့်ပါက လွှတ်တော်များ၏ အခန်းကဏ္ဍပါ သေးသိမ်သွားနိုင်သည်လည်းဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် ထိုအခြေအနေများကို ရိပ်မိရန်လိုပါသည်။ သူမသည် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး၏ ထောက်ခံမှုကို ရရှိပြီးဖြစ်သလို သမ္မတနှင့် လွှတ်တော်ဥက္ကဌ နှစ်ဦးလုံးကပါ သူမ၏ ပါဝါကို အသုံးချ၍ ၎င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍကိုတည်ဆောက်ရန် အလိုရှိနေကြသည်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ပါဝါချင်းပြိုင်မှုတွင် လူထုခေါင်းဆောင်အနေဖြင့် မည်သည့်ဘက်ကရပ်တည်လိုက် ခြင်းဖြင့် ထိုအားပြိုင်မှုများကို ပြေလည်စေပြီး မျှခြေတစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်မည်ဆိုသည်ကိုလည်း စဉ်းစားရန်လိုပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ထက် အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ဝင်ရောက်လိုက်ခြင်းက ဦးခင်အောင်မြင့်ကို ထိန်းပြီးဖြစ်သလို ပြည်သူအများစုကို ကိုယ်စားပြု သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ အခန်းကဏ္ဍကို ပိုမိုမြင့်တက်လာစေလိမ့်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း.........
VOA မြန်မာပိုင်းဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း အား သွားရောက်တွေ့ ဆုံ
12/08/2011 08:23:00 AM
နိုဗယ်ဆု နှစ် ၂၀ပြည့် ဂုဏ်ပြုပွဲ ဖိတ်စာ
လာမည့် စနေနေ့ နံနက် ၈း၃၀ မှ ၁၁နာရီ၊ ကြည့်မြင်တိုင် သာဓု ပရိယတ္တိစာသင်တိုက် (ရွှေည၀ါ ဆရာတော် ကျောင်း) တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုဗယ်ဆု ရရှိခြင်းနှစ် ၂၀ပြည့် ဂုဏ်ပြု အခမ်းအနားကို ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် မည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင်ပါကြောင်း၊ ယခုအခမ်းအနားသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်မည်ဟု သိရသည်။ ထပ်မံ သိရှိလိုသည်များရှိပါက ကိုကိုကြီး စမ်းချောင်း ဖုန်း ၀၉၇၃၁၀-၄၂၃၄ သို့စုံစမ်းမေးမြန်း နိုင်ပါကြောင်း.. YPI သစ်ထူးလွင်
12/08/2011 08:13:00 AM
့(RSF)မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် ချီးမြှင့်သည့် သတင်းမီဒီယာဆုကို Eleven Media Group မှရရှိ
ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့က ပဲရစ်မြို့၌ ကျင်းပခဲ့ပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ Le Monde သတင်းစာ၏ Director ဖြစ်သူ Éric Israelevitch ကတက်ရောက်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းနှင့် Eleven Media Group မှ Weekly
Eleven News Journal အယ်ဒီတာချုပ် ကိုဝေဖြိုးနှင့် Premier Eleven Sports Journal တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ ကိုမြတ်ထွဋ်ဝင်းတို့ တက်ရောက်လက်ခံရယူခဲ့ပါသည်။
ယခုနှစ်တွင် တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံး သတင်းမီဒီယာဆုနှင့် တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံး ဂျာနယ်လစ်ဆုနှစ်ဆုကို ပေးအပ်ခဲ့ပြီး သတင်းမီဒီယာဆုကို
Elev en Media Group (Weekly Eleven News Journal)မှ ရရှိခဲ့ပြီး ယခုနှစ်အတွက် Journalist of the Year ဆုကို ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှ ကာတွန်း ဆရာ
Ali Fersat က ရရှိသွားခဲ့သည်။
Weekly Eleven News Journal အယ်ဒီတာချုပ် ကိုဝေဖြိုးနှင့် Premier Eleven Sports Journal တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ ကိုမြတ်ထွဋ်ဝင်း
အကောင်းဆုံး သတင်းမီဒီယာဆု ရွေးချယ်ရန်အတွက် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှ Emeequis၊ အာဖဂန်နစ္စတန် 8 Sobh ၊ ဘာရိန်းနိုင်ငံ မှ AL-Wazat ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ Weekly Eleven Journal ၊ ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံမှ Uznews နှင့် ဆူဒန်နိုင်ငံမှ Ajras Al-Hurriya ဂျာနယ်များအား ပဏာမရွေးချယ်ခဲ့ပြီးမှ ပြန်လည်ရွေးခြင်းဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံး ဂျာနယ်လစ်ဆုအတွက် ဆီးရီးယား၊ တရုတ်၊ ဂရိ၊ ကိုလံဘီယာ၊ အီရန်၊ ဘူရွန်ဒီနိုင်ငံတို့မှ ဂျာနယ်လစ်များ အား ပဏာမရွေးချယ်ခဲ့ပြီးမှ ပြန်လည်ရွေးချယ်ပေးခဲ့သည်။ ယခင်က ပြင်သစ်နိုင်ငံအခြေစိုက် နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအဖွဲ့(Reporters Without Borders-RSF) မှချီးမြှင့်သည့် ဆုများဖြစ်သော တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံး ဂျာနယ်လစ်ဆု (Journalist of the Year)ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်မှ ရရှိခဲ့ဖူးသည်။ တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး အွန်လိုင်းမီဒီယာဆု(Cyber Dissident) ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ဦးသူရခေါ် ဇာဂနာနှင့် ကိုနေဘုန်းလတ်တို့က ပူးတွဲ ရရှိခဲ့ဖူးသည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် RSF ကပေးအပ်သည့်ဆုကို ဒေါ်စမ်းစမ်းနွဲ့မှ ရရှိခဲ့ဖူးကြောင်း
သိရသည်။ နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအဖွဲ့သည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှစ၍ ဂျာနယ်လစ်များနှင့် မီဒီယာများကို ဂုဏ်ပြုဆုများ ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ယခုနှစ် ဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့တွင် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဂျာနယ်လစ် ၁၂ ဦးပါဝင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဆုသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ၂၀၀ ကျော်မှ ရွေးချယ်ချီးမြှင့်သည့်ဆုဖြစ်ပြီး မီဒီယာလောကတွင်
အလေး ထားသည့်ဆုများအနက် တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မင်္ဂလာပါ လေးစားရပါသော၊ ကြွရောက် ချီးမြှင့်သော လူကြီးမင်းများနှင့် နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများခင်ဗျာ- EMG ရဲ့ကိုယ်စား
R.S.F ကို လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာ ဒီဆုရရှိခဲ့တဲ့အတွက် စိတ်ဓာတ်တက်ကြွဂုဏ်ယူရပေမယ့် တစ်ဖက်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင် ဂျာနယ်လစ်တွေဟာ ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပြီး အကျဉ်းထောင်ထဲမှာလည်း တချို့ကျန်ရှိနေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အပြင် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မမေ့ မလျော့သင့်တဲ့သူတစ်ဦးကတော့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်း ကိုမင်းကိုနိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် အခန်းကျဉ်းထဲမှာ တစ်ယောက်ထဲ ယုံကြည်ချက်ကို
မစွန့်လွှတ်ဘဲ နေနိုင်ခဲ့တဲ့ သတ္တိနဲ့ စွန့်လွှတ်မှုတွေ၊ သူရဲ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ စွန့်လွှတ်မှုတွေကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်တော့မှ မေ့လျော့မထားသင့်ပါဘူး။
Miss Moe Yan 2011 ရွေးချယ်ပွဲ မြင်ကွင်းများ (ဓါတ်ပုံ)
ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်ကြီးများ ဟိုတယ်တွင် ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ ညက ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော Miss Moe Yan 2011 ရွေးချယ်ပွဲ မြင်ကွင်းများ (ဓါတ်ပုံ)
မြန်မာ့အကြီးဆုံးရွှေကြောတွင် တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ စတင်
ကချင်ပြည်နယ်မှာ မြေတူးစက်နဲ့ ရွှေတူးနေပုံပါ
ကရင်ပြည်နယ် မယ်ဝိုင်-မဲကထိမှ တောင်ငူမြို့အထိ ရှည်သော မြန်မာ့အကြီးဆုံး ရွှေကြောတွင် ရွှေတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများ စတင်နေပြီဟု အငြိမ်းစား ဘူမိဗေဒပါမောက္ခ ဦးစိုးသိန်းက ပြောသည်။ အကြီးမားဆုံး ရွှေကြောဖြစ်ကြောင်းကို သိပ္ပံနည်းကျ မှတ်တမ်းများ၊ ကောင်းကင်ဂြိုဟ်တုမှ ရိုက်ကူးသည့် ဓာတ်ပုံအချက်အလက်များအရ ယခုနှစ်အတွင်းမှ စတင်အတည်ပြုသတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၄င်းရွှေကြောသည် ကရင်ပြည်နယ် မယ်ဝိုင်းဒေသမှ တစ်ဆင့် မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားတောင်ခြေ အရှေ့ဘက် ဖာပွန်မြို့အထိ၊
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး မြောက်ဘက် ရွှေကျင်၊ ကျောက်ကြီး၊ တောင်ငူမြို့များအနီးထိ တိုင်အောင် အကျယ်အ၀န်းရှိသည်ဟု အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က ဆိုသည်။ မြန်မာပြည်မှာ အကြီးဆုံးလို့ ဆိုတဲ့ ရွှေ၊ သတ္တုကြောတွေထက် အဆပေါင်းရာနဲ့ချီ ပိုကြီးမားတယ်၊ ရွှေထွက်နှုန်းကလည်း တချို့နေရာတွေမှာဆို ကျောက်သားနဲ့ ရောနှောနေတဲ့ ရွှေတုံးတွေ မြေပြင်ပေါ်မှာတောင် တွေ့ရတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်က ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတစ်ခု နုန်းမြေသိုက်တူးပြီး ရွှေတန်နဲ့ချီ ရခဲ့ဖူးတယ်။ ရွှေသားပါဝင်တဲ့ ကျောက်သားတစ်တန်ကို ပျမ်းမျှ ရွှေတစ်ဆယ်သား ထွက်ရှိနိုင်ပြီး ရွှေနှစ်ဆယ်သား အထိတောင် ထွက်နိုင်တဲ့နေရာတွေ
အများကြီးရှိတယ်”ဟု ၄င်းက ပြောသည်။ “အခုဆိုရင် မယ်ဝိုင်ဒေသ တစ်လျှောက်မှာ
ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီလေးခုလောက် ရွှေတူးဖော်တဲ့ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေကြတယ်၊ ရွှေကြောကျွမ်းကျင်တဲ့ ဒေသခံတွေခေါ်ယူပြီး ကျယ်ပြန့်စွာ လုပ်နေကြပြီ။ နောက်ပိုင်း တူးဖော်ခွင့်ရ ကုမ္ပဏီတွေ များလာမှာပေါ့” ဟု ၄င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ ရွှေကြောတည်ရှိမှုနှင့် ရွှေထွက်ရှိနိုင်သည့် နေရာဒေသများ၊ ရွှေထွက်ရှိနှုန်းများကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် အငြိမ်းစားဘူမိဗေဒပညာရှင် ဦးအောင်ဆန်းက သိပ္ပံနည်းကျ ကွင်းဆင်း၍ အသေးစိတ် မှတ်တမ်းပြုစုခဲ့ကြောင်း၊ ထွက်ရှိသည့် ရွှေအမျိုးအစားမှာ နိုင်ငံတကာ ရောင်းတမ်းဝင် အရည်အသွေးရှိကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ထုတ် Popular News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ကျားများ ဈေးကောင်းရရှိနေ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ကျားကောင်ရေ လျော့ကျမှု မြန်ဆန်စွာဖြစ်ပေါ်နေ
ဆေးဘက်ဝင်သည်ဟု ယူဆမှုများကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံ ဈေးကွက်တွင် ကျားများ ဈေးကောင်းရရှိနေသည့် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း၌ ကျားကောင်ရေ လျော့ကျမှု မြန်ဆန်စွာ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ယခင်က ကျားကောင်ရေ ပေါများစွာတည်ရှိခဲ့သည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ယခုအခါ တွင် သစ်တောပြုန်းတီးမှုနှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတို့ကြောင့် ကျားကောင်ရေ လျော့နည်း ကျဆင်းလာခြင်းကို ရင်ဆိုင် လာရသည်ဟု သိရှိရသည်။
ကျားတစ်ကောင်ရလာရင် လက်ပြတ်နေတာတောင်မှ သိန်း ၈၀ ရတယ်။ သေနေတဲ့တစ်ကောင်လုံး
ရမယ်ဆိုရင် သိန်း ၁၀၀ ရတယ်။ ဒါကို ဟိုဘက်မှာလည်း ရောင်းလို့ ရတယ် . . .
“ကျားကတော့ ကာကွယ်ထားတဲ့အထဲမှာ နံပါတ် ၁ ပဲ။ ဖမ်းပိုင်ခွင့် မရှိဘူး။ ဒီဟာတွေကို အကြီးအကျယ် တရုတ်ပြည်ကိုတင်တယ်။ wildlife trade က တော်တော်အန္တရာယ်ကြီးတယ်။ တန်ဖိုးရှိသော သစ်ပင်များနဲ့ သတ္တ၀ါများ။ သစ်ဆိုတာကတော့ မပြောနဲ့တော့။ သစ်မွှေး အပါအ၀င်ပေါ့။ လူတွေက တရားမ၀င် ထုတ်ယူကြတယ်။ ဥပမာ မြိတ် မှာ ကျားတစ်ကောင်ရလာရင် လက်ပြတ်နေတာတောင်မှ သိန်း ၈၀ ရတယ်။ သေနေတဲ့ တစ်ကောင်လုံးရ မယ်ဆိုရင် သိန်း ၁၀၀ ရတယ်။ ဒါ ကိုဟိုဘက်မှာလည်း ရောင်းလို့ရတယ်။ ဒီဘက်ကနေလည်း မန္တလေးအထိ တင်ပြီး တရုတ်ပြည်မှာ ရောင်းလို့ရတယ်။ ဒီလို ဈေးကွက်ထဲမှာ မတန်တဆ ရတဲ့အတွက်ကြောင့်
ကျားကောင်ရေတွေ လျော့နည်းလာတယ်” ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ WWF International Greater Mekong Programme မှ စီမံကိန်းအရာရှိ ဦးတင်သန်းက ပြောကြားသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် လက်ရှိ ကျားကောင်ရေ ၃၀၀၀ ၀န်းကျင်သာ ကျန်ရှိကြောင်းနှင့် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် အကောင်ရေ ၅၀၀၀ မှ ၇၀၀၀ အကြား ရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့တွင် ၁၉၉၈ ခုနှစ်က ကျားကောင်ရေ ၁၂၀၀ ၀န်းကျင်ခန့်ရှိခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် အကောင်ရေ ၃၅၀ ခန့်သာ ကျန်ရှိတော့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်ဒိုချိုင်းနား ကျားနှင့် ဘင်္ဂလားကျားနှစ်မျိုးကို တွေ့ရှိနိုင်ပြီး ကျားကောင်ရေ အများစုကို ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်းဒေသ၊ ထမံသီဘေးမဲ့တောနှင့် တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးတို့တွင် တွေ့ရှိရသည်။
“ကျားထိန်းသိမ်းနိုင်မလားဆို တာ လူသားတွေအတွက် စိန်ခေါ်မှု တစ်ရပ်ပဲ။ ဘာလို့လဲဆို နိစ္စဓူဝ ကျားတွေ တောထဲက ပျောက်ပျောက် နေကြတယ်။ အကြောင်းရင်းမှာ
အဓိကအကျဆုံးက တရုတ်ပြည်က ကျားရိုးကို ဆေးဘက်ဝင်ဆိုပြီး ယုံ ကြည်ထားတာပဲ။ လူတွေ လိုလားတဲ့ အာနိသင်မျိုးကိုရတယ်လို့ ထင်ယောင်ထင်မှားနဲ့ပေါ့။ ဆေးအမျိုးမျိုးဖော်ပြီး ရောင်းကြတော့ ဈေးပေးပြီးဝယ်ကြတယ်၊၊ ကျားရဲ့အရေပြားကလည်း မတန်တဆလှတယ်”ဟု ဦးတင်သန်းက ပြောပြခဲ့သည်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင်း တည်ရှိသော အကြီးဆုံး ကျားထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေ ဟူးကောင်းတွင် လက်ရှိ၌ ကျားကောင်ရေသည် ၁၀ ဂဏန်း အောက်တွင်သာ ရှိနေသည်။ ထို့
အတူ တနင်္သာရီဒေသတွင်လည်း ကျားကောင်ရေများ လျော့ကျလာသည်ဟု သိရသည်။ Eleven Media Group
12/07/2011 08:23:00 PM
ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဧည့်သည် စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကောင်တာ စတင်ဖွင့်လှစ်
ရန်ကုန်လေဆိပ်ရှိ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည် စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကောင်တာအား ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်
ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်များအတွက် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားဧည့်သည် စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကောင်တာအား စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်လေဆိပ်ကဲ့သို့ မန္တလေး၊ ညောင်ဦးစသည့် အခြားလေ ဆိပ်များတွင်လည်း နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားဧည့်သည်စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ကောင်တာများဆက်လက်ဖွင့်လှစ် သွားရန်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါ သည်။
ရန်ကုန်လေဆိပ်ရှိ နိုင်ငံခြား သားခရီးသွားဧည့်သည်စောင့်ရှောက် ရေးအဖွဲ့ကောင်တာအား နိုဝင်ဘာ လ ၂၅ ရက်နေ့တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ သည်။
ယခင်ကရှိပြီးဖြစ်သော Tourist Information ကောင်တာကို လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အမည်ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဧည့်သည်များအား လိုအပ်သည့်ကိစ္စရပ်များအား ကူညီပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
''ဒီကောင်တာကအရင် Tourist Information ကောင်တာကို လက်ရှိလိုအပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အမည်ပြောင်းလဲ ဖွင့်လှစ်ထားတာပါ။ အဓိက လုပ်ဆောင်သွားမယ့်အချက်တွေက မြန်မာနိုင်ငံကို ၀င်ရောက် လာမယ့် နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေကို ဘယ်နေရာတွေ သွားခွင့်ရှိတယ်။ ဘယ်နေရာတွေကိုတော့ သွားခွင့်မရှိဘူးစတဲ့ ကန့်သတ်ထားတဲ့ နေရာတွေကို သိအောင်ပြောပြပေးမယ်။ လမ်းညွှန်မြေပုံပါ ထုတ်ပေးမယ်။ ထပ်ဆောင်းတာဝန်အနေနဲ့ ဧည့်လမ်းညွှန်တွေကို ကြီးကြပ်သွားမယ်။ ဧည့်လမ်းညွှန်တွေ လိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိသလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်သွားမယ်။ ဥပမာ သတ်မှတ်ယူနီဖောင်း ၀တ်တာမျိုးပေါ့'' ဟု ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခုနှစ်မှစတင်ကာ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်များ၏ လုံခြုံမှုအတွက် ကျိုက်ထီးရိုးနှင့် ပုဂံဒေသတွင်
နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည် စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့နှင့် လုံခြုံရေးအဖွဲ့များကို အသီးသီးဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်သောခရီးသွားများအနက် မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် လာရောက်ကြသူများသည် အဓိကခရီးသွား အမျိုးအစားဖြစ်နေပြီး ဒေသတွင်းသွားလာရင်းမှ အမှုအခင်းကြုံရခြင်းအချို့လည်း ရှိခဲ့ကြောင်း၊ မကြာသေးမီက ပုဂံဒေသသို့ လာရောက်လည်ပတ်သော ဂျပန်အမျိုးသမီး သေဆုံးခဲ့မှု၊ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဧည့်သည်ထံမှ ပစ္စည်းလုယူခံရမှုစသည်တို့ ကြုံတွေ့ရခြင်းများ ရှိခဲ့ကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်။
အာဆီယံကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး နေပြည်တော်၌ ကျင်းပ
(၁၂) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေး (TELSOM) ကို နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန ပင်မအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် စတင်ကျင်းပသည်။ ရှေးဦးစွာ အစည်းအဝေး၌ ယခင်သဘာပတိဖြစ်သူ မလေးရှားနိုင်ငံမှ H.E Dato Sri Kumaruddin Siaraf က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးက မြန်မာနိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခင်မောင်သက်အား သဘာပတိအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ (NTC) ဥက္ကဋ္ဌ Mr.PHILIPA.VARILLA
အား ဒုတိယသဘာပတိအဖြစ် လည်းကောင်း ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည်။ ထို့နောက် သဘာပတိဦးခင်မောင်သက်က (၁၂) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဖွင့်အမှာစကား ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ အစည်းအဝေးသို့ အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ကြပြီး အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ အိုင်စီတီနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ အေအီးစီကောင်စီနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာများ၊ အာဆီယံ အိုင်စီတီ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၅) ဆိုင်ရာကိစ္စများ၊ အာဆီယံ အိုင်စီတီရန် ပုံငွေဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ TELSOM ဦးစားပေးစီမံကိန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ Project များအား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ (၁၇) ကြိမ်မြောက် အေတီအာစီ အစည်းအဝေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ TELSOM နှင့် ATRC Working Group များအတွက် တီအိုအာ ကိစ္စရပ်များ၊ ASEAN-ITU ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး MOU ကိစ္စရပ်များ၊ TELSOM နှင့် ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများ အစည်းအဝေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ (၁၁) ကြိမ်မြောက် TELMIN အစည်းအဝေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ပူးတွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်များဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် အခြားကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးကြသည်။ ထို့အပြင် (၁၃) ကြိမ်မြောက် TELSOM အစည်းအဝေးကျင်းပရန်အတွက် ကျင်းပမည့် နေ့ရက်နှင့် နေရာတို့ကို ရွေးချယ် အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ပြီး အစည်းအဝေးအတွက် Report ကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နေ့ထုတ် မြဝတီ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။